မူလစာမျက်နှာ The Health Republic® Dietary Supplement
The Health Republic® Dietary Supplement
အမျိုးအစား: စားစရာသောက်စရာ ,
“ကျန်းမာခြင်းဟာ ဥစ္စာဓနတွေ ပေါကြွယ်ဝခြင်းထက် ပိုပြီး အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ရတနာတစ်ပါးပါပဲ။ (English version below)
The Health Republic® Dietary Supplement ဟာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ရှိ အုန်းပင်ရိုင်းများဆီမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ခူးဆွတ်ထားတဲ့ အုန်းသီးအရင့်များမှ ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဖက်ဝင်အုန်းဆီ Premium Virgin Coconut Oil 100% ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်ဓာတ်စာဖြစ်ပါတယ်။ The Health Republic® Dietary Supplement မှာ Lauric Acid နဲ့ Antioxidant ပမာဏ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီး အနာရောဂါကင်းစင်ကာ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာထစမှာ ထမင်းစားဇွန်းနဲ့ တစ်ဇွန်း နေ့စဉ်ပုံမှန် မှီဝဲသောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်
- ဦးနှောက်အာဟာရဓာတ် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ - စိတ်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း - သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း - သွေးတိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း - ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း - အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်ခြင်း - အသည်းကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း - ဆီးချို ထိန်းပေးခြင်း - အရိုးပွခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း - ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း - ကိုယ်ခံအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း - အရွယ်တင်နုပျိုခြင်း - ဝမ်းမှန်ပြီး လိပ်ခေါင်းသက်သာခြင်း စတဲ့ အဓိက ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို လက်တွေ့ခံစားနိုင်ပါတယ်။
“The Health Republic® Dietary Supplement ကို သောက်ပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ကြပါစို့။
The Health Republic® isaDietary Supplement and Super food made from 100% Premium Virgin Coconut Oil. This premium VCO is delicately collected from mature wild & fresh coconuts harvested in coastal regions of Myanmar. The Health Republic® Dietary Supplement contains more than 50% of Lauric Acid and plentiful Antioxidants which give scientifically proven health benefits to our bodies. All you need is 1 tablespoon of this supplement per day before your breakfast.
(1) Nourish brain & help mental well-being (2) Supreme oral care (3) Prevent hypertension (4) Weight loss (5) Healthy digestive tract (6) Good liver health (7) Control Diabetes mellitus (8) Prevent osteoporosis (9) Boost metabolism (10) Boost immunity (11) Anti-aging (12) Prevent constipation & hemorrhoids
Let’s take The Health Republic ® Dietary Supplement for our good health! Live Healthy & Happy.